Xeelado faafin toosan oo leh ikhtiyaar dhaqaale | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Xeeladaha Faafidda Toosan ee leh Ikhtiyaar Maaliyadeed, Qaybta 2
Casudi casals | | Bolsa
Waxaan dhawaan ka faalloonnay blog-ka qaar xeelado leh ikhtiyaarro maaliyadeed. Suuqa kala doorashadu waa mid ka mid ah kuwa ugu firfircoon dabeecadeeda awgeed. Qaar ka mid ah xeeladaha lagu sifeeyay waxay ahaayeen Wicitaan la dabooshay, Is-qabta iyo Xarigga. Kuwani waa qaar ka mid ah kuwa badan oo jira oo noo ogolaanaya inaan ka faa'iidaysano oo ka faa'iidaysano awooddaas ay suuqyada maaliyadeed noo soo bandhigaan. Laakiin maqaalkan waxaan ku taaban doonaa fidinta tooska ah, si aan "ku ciyaarno" qiimaha shaqo joojinta ee kala duwan.
Qaybtan labaad, ujeedadu waxay tahay in qaar kale dib loo eego, oo aan u guntado kuwa sifahoodu u yara dhib badnaan karaan. Sababtoo ah waxaa lagu talinayaa in la raaco sida ay u qoran yihiin. mara mid ka mid ah Ikhtiyaarada Maaliyadeed, ka dibna sii wad qaybta hore ee Xeeladaha Ikhtiyaarada leh ilaa aad halkan ka gaadhayso. Halkaa marka ay marayso, waxa aan rajaynayaa in xeeladaha cusub ee aanu arki doonno ay iyaguna noqdaan kuwo hawl-gal ah oo waxtar kuu leh.
1 Faafinta Wicista Dibida
1.1 Wacitaanka Bear Faafin
2 Bear Ku rid Faafin
2.1 Faafida Dibida
3 Istaraatiijiyada Kondorka Birta
3.1 Condor Iron Reverse
4 Gabagabada ku saabsan fidinta tooska ah
Faafinta Wicista Dibida
Istaraatiijiyaddan waxa lagu daraa fidinta toosan. Waxay ka kooban tahay isku mar iibsashada iyo iibinta laba ikhtiyaar oo wicitaan ah hanti isku mid ah iyo isla taariikhda dhicitaanka, laakiin leh qiimayaal shaqo joojin oo kala duwan. Iibka waxaa lagu sameeyaa qiimaha shaqo joojinta ugu hooseeya iyo iibka qiimaha shaqo joojinta ugu sarreeya. Istaraatiijiyadan ikhtiyaariga ah waxaa la hirgeliyaa marka maalgaliyuhu uu caqli-gal yahay hanti ku taal.
Khasaaraha iyo faa'iidada labaduba waa xaddidan yihiin, waxayna ku xirnaan doonaan fogaanta aan ku dhejineyno qiimaha shaqo joojinta. Xaaladaha ay jiraan isbeddel weyn oo ku saabsan hantida, waxaa inta badan jira fursado leh faa'iido / khatar xiiso leh.
Wacitaanka Bear Faafin
Waxay la mid tahay istiraatijiyaddii hore, marka laga reebo istaraatiijiyadan wicitaanka la iibiyay waa kan leh qiimaha shaqo joojinta ugu hooseeya, iyo wacitaanka la iibsaday waa kan leh qiimaha shaqo joojinta ugu sarreeya.
Bear Ku rid Faafin
Istaraatiijiyada Faafinta Bear Put waxay la mid tahay tii hore, kaliya markan waa la dabaqay marka maalgaliyuhu uu tixgeliyo in ay jiri karto hoos u dhac ku yimaada hantida. Ujeedadu waa in laga faa'iidaysto dhibcaha iyadoo la xaddidayo khasaaraha lana xaddidayo faa'iidooyinka. Waayo Put waa la soo iibiyaa mid kalena waa la iibiyaa isku mar isla qaan-gaarnimada iyo hantida, laakiin leh qiime jimicsi oo kala duwan. Waxa la soo gatay waa ka ugu shaqo joojinta ugu sarreeya, waxa la iibiyeyna waxa uu dhigayaa kan qiimihiisu shaqo-joojinta ugu hooseeya ku jiro.
Faa'iidada ugu badan ee la higsan karo waa farqiga qiimaha u dhexeeya labada qiimaha jimicsiga laga jaray faraqa u dhexeeya khidmadaha la bixiyay iyo khidmadaha la ururiyay. Dhanka kale, khasaaraha ugu badan waa faraqa u dhexeeya khidmadaha la bixiyay iyo khidmadaha la ururiyay.
Dhanka kale, iyo isla xididka, waxaan dib u celin karnaa iibsashada iyo iibinta nidaamka hore ee istiraatiijiyadii hore. Markaa dibiga la geliyo, Put leh qiimaha shaqo joojinta ugu sarreeya waa la iibin lahaa, iyo mid kale ayaa lagu iibsan doonaa qiimo jimicsi hoose. Sidan, waxaan ku bilaabi karnaa "faa'iido" oo kaliya haddii qiimihiisu hoos u dhaco waxaan galeynaa khasaare, kaas oo xaddidan doona iibsashada qiimaha shaqo joojinta hoose.
Istaraatiijiyada Kondorka Birta
Istaraatiijiyadani waa mid ka mid ah kuwa ugu horumarsan suuqa kala doorashada ee fidsan toosan. Waxaa la soo saaray mahad afar doorasho, laba wac iyo laba gelin. Delta waa dhexdhexaad iyo Theta waa mid togan, taas oo ah, ma saameynayso isbeddellada qiimaha ee xadka ay ka shaqeyso. Si kastaba ha noqotee, waxa aadka u wanaagsan iyada ayaa ah qodobka wakhtiga, maadaama ay kordhinayso faa'iidooyinkayaga. Sidaa si la mid ah, haddii aynu galnay wakhti isbedel badan, oo hadhow hoos u dhaco, hoos u dhigista qiimaha ikhtiyaariga ah xitaa in ka badan, waa wax ku dambeeya faa'iidada.
Fursadaha Maaliyadeed, Wicitaan iyo Gelin
Si loo dhaqan geliyo, dhammaan xulashooyinka waa inay ahaadaan isla taariikhda uu dhacayo. Dabadeed, iyadoo xisaabta lagu darsanayo in qiimaha shaqo joojinta ugu horreeya uu yahay kan ugu hooseeya kan ugu dambeeyana uu yahay kan ugu sarreeya (TO waxay ka kooban tahay sidan soo socota.
A. Iibka ku dhejinta qiimaha shaqo joojinta A (kan hoose).
B. Ku iibiso Ku dheji qiimihii shaqo joojinta B (wax xoogaa ka sarreeya).
C. Iibinta wicitaanka oo leh qiime jimicsi C (ka sarreeya).
D. Iibsashada wicitaanka oo leh qiime shaqo joojin D (kan ugu sarreeya).
Dhab ahaantii, xeelad this waa isku darka Faafinta Wicista Bear iyo Faafinta Dibida. Inta lagu jiro kala duwanaansho taas oo ku xirnaan doonta fogaanta qiimaha shaqo joojinta waxaan noqon doonaa faa'iido. Kaliya haddii qiimuhu kordho ama hoos uga dhaco boosasheena waxaan geli karnaa khasaare, in kasta oo ay xaddidi doonaan iibsiyada aan sameynay.
Condor Iron Reverse
Es isku darka Faafida Wicista Dibida oo ay weheliso Faafidda Bear. Amarka in la raaco iibsiyada iyo iibinta 4 ikhtiyaari waa gebi ahaanba liddi ku ah. Ugu horrayn waxaanu ku "bilaaban karnaa" khasaaraha, kaas oo ku jiraya inta u dhaxaysa halka aanu wax ka iibsanayno. Marka qiimuhu ka baxo aaggan oo uu sare u kaco ama hoos u dhaco, faa'iidooyinku way hirgalaan.
Kondorka birta ee rogaal celiska ah faa'iidooyinka iman kara way sarreeyaan, si kastaba ha ahaatee waxay sidoo kale aad u yar yihiin tan iyo markii aan ka bilowno khasaaraha, iyo haddii ay dhacdo kala duwanaansho qiimo yar faa'iidooyinkan lama gaari doono.
Gabagabada ku saabsan fidinta tooska ah
Xeeladaha fidinta tooska ah waxay u muuqdaan inay bixiyaan natiijooyin wanaagsan haddii qiimaha hantidu u dhaqmo sida maalgashadayaasha ay filayaan. Ahaanshaha isku-darka 2 ama xulashooyin badan, waxaa suurtagal ah in ay jiraan jahawareer marka ikhtiyaarrada ganacsiga. Tusaale ahaan, aynu ku dhammaanno iibsashada intii aan iibin lahayn. Dallaal badan ayaa bixiya suurtagalnimada u fiirso garaafka ka dhalanaya xeeladaheena ka hor ganacsiga, taasi waxay naga caawinaysaa inaan aragno inay tahay waxa aan doonayno. Intaa waxaa dheer, waxay noo ogolaadaan inaan aragno soo noqoshada / khatarta iyo ixtimaalka aan gaareyno faa'iidada ama khasaaraha ugu badan.
Taladaydu waa in aad wakhti qaadato si fiican u falanqeeyaan hawlgallada, si loo hagaajiyo yaree khaladaadka caadiga ah oo kordhi faa'iidada iman karta oo yarayso khasaaraha. Waxaan rajeynayaa in maqaalkani uu kaa caawiyay inaad barato naftaada xeeladaha faafinta tooska ah ee leh ikhtiyaarrada!
Xeeladaha Ikhtiyaariyada Maaliyadeed, Qeybta 1
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Alaabada maaliyadeed » Bolsa » Xeeladaha Faafidda Toosan ee leh Ikhtiyaar Maaliyadeed, Qaybta 2
Qaabka 390: maxaa loogu talagalay?
Xigasho Bill Gates